विपदमाथि अर्को विपद : कोराना त्रासमै बाढीले पनि निन्द्रा खोस्यो – Satyapati
Loading... आजः शनिबार, असार २७, २०७७/ Saturday 11th July 2020 9:21 am
विपदमाथि अर्को विपद : कोराना त्रासमै बाढीले पनि निन्द्रा खोस्यो
काशी दर्शन । आइतवार, असार ७, २०७७
बाँके । राप्तीमा शनिबार बाढी आयो । राप्ती नदीमा पानीको सतहले ‘खतराको विन्दु’ पार गर्यो । पानीको सतह ५.७४ मिटर पुगेपछि तत्काल खतराको साइरन बजाइयो । दाङ, रोल्पा, प्युठान र बाँकेमा शनिबार बिहानैदेखि भएको बर्षाका कारण राप्ती नदीमा पानीको सतहले ‘खतराको विन्दु’ पार गरेको थियो ।
राप्ती नदीमा पानीको सतह ५.४० मिटरभन्दा बढी पुगेपछि ‘खतराको विन्दु’ पार गरेको मानिन्छ । शनिबार बेलुका ६ः४५ बजे नदीको सतहले ५.७४ मिटर पार गरेपछि राप्ती तटीय क्षेत्र आसपासका बस्तीहरुलाई सुरक्षित र सतर्कता अपनाउन खतराको साइरन बजाइएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले जानकारी दिए ।
कुसुममा रहेको सो बाढी मापन केन्द्रबाट बाढीसहितको नदी होलियासम्म पुग्न करिब चारदेखि पाँच घण्टा लाग्ने भएकोले तत्काल खतराको साइरन बजाइएको थियो । पानीको सतह ६ मिटर पार गरेपछि राप्ती तटीय क्षेत्रमा धेरै क्षति हुने भएकाले साइरन बज्ने बित्तिकै जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरु सुरक्षित स्थानमा जान थालेको प्रजिअ कुरुम्वाङले बताए ।
उनका अनुसार सम्भावित खतरामा रहेका नागरिकहरुलाई अग्लो ठाउँमा जान सूचना तथा जानकारी दिने काम गरिएको छ । जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र बाँकेका सूचना अधिकृत गौरी बुढाथोकीले नदीको सतहले खतराको विन्दु पार गरेपद्धि बाढी पस्ने सम्भावित क्षेत्रहरुमा साइरन बजाइएको जानकारी दिए ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका १ देखि ७ सम्मका वडा, डुडवाका १ देखि ३ र नरैनापुरका ५ र ६ वडा बाढीको उच्च जोखिममा छन् । पानीको सतह ५.४० मिटर पार गरेपछि फत्तेपुर, होलिया, बेतहनी, कम्दी, गंगापुर, नरैनापुरमा डुबानको जोखिम बढ्छ । भारतले राप्ती नदीमा बनाएको लक्ष्मणपुर बाँधका ढोकाहरु समयमा खोलिदिँदा डुबानको जोखिम कम हुन्छ ।
तर, बाँधको ढोकाहरु खोल्दा आफ्नो देशमा डुबान हुने भएकाले भारतले ढोका खोल्दैन, जसले गर्दा बाँकेमा डुबान हुँदै आएको छ । समुदायलाई बाढीबाट हुने क्षतिलाई कम गर्दै सुरक्षित हुन आग्रह गर्दै जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले उद्धार सामाग्रीसहित उद्धार टोलीलाई राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुरमा सतर्क अवस्थामा राखेको छ ।
नदी वरिपरिका गाउँमा पानी पस्ने अवस्था आउनेबित्तिकै उद्धार टोली गाउँमा पुगिसक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ । राप्ती नदीले खतराको तह पार गरेको जानकारी साइरनमार्फत आउने बित्तिकै सम्भावित सबै क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ ।
कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका नागरिकहरु अब बाढीले पुर्याउन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट जोगिनुपर्ने भएको छ । ‘कोरोना भाइरसको कहर चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीहरु भाइरससँग जुध्नुपरेको छ । अब फेरि मनसुन सुरु भएसँगै अर्को विपद्को सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ,’ राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले भने ।
उनका अनुसार बन्दाबन्दीका बीचमा पनि हामी समुदाय स्तरमा बाढीसँग जुध्न तयारी थालिएको छ । ‘बाढी आइहालेमा कसरी सूचना पुर्याउने र कसरी सुरक्षित स्थानतर्फ लाग्ने भन्ने तयारी अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीकै संकटमा बाढीबाट जोगिनुपर्ने अवस्था आएको छ । एकैपटक दुई वटा संकटसँग लड्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
समुदायलाई कोरोना भाइरससँग सावधानी अपनाउँदै बाढीबाट जोगिन सतर्क अवस्थामा राखिएको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताए । उनले भने, ‘बाढीको जोखिम पहिले पनि थियो । यो नयाँ विपद् त होइन । तर, कोरोना भाइरससँगै समुदायका नागरिकलाई बाढीबाट पनि बचाउनुपर्ने भएको छ ।’
हरेक बर्ष बाढीका कारण राप्ती तटीय क्षेत्रका नागरिकहरु अस्थायीरुपमै बसाई सर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘घरभित्र बस्ने हो भने बाढी आएर लैजान्छ कि भन्ने डर लाग्छ, बर्षा सुरु भएपछि नदीको छेउमा बसेर समय बिताउन मन लाग्छ,’ राप्ती तटीय क्षेत्रमा रहेको टेपरी गाउँका स्थानीयबासी राजेन्द्रकुमार शर्माले भने ।
असार लागेपछि उनको निद्रा खोसिएको छ । टर्चलाइट बाल्दै बेलाबखत उर्लिरहेको राप्ती हेर्नु र निदाउने चेष्टा गर्नुमै छर्लङ्ग रात बित्ने गर्छ । ‘प्रत्येक वर्ष नदी बस्ती वरवर आउँदा स्थानीय पनि परपर सर्छन् । अब त मेरो जग्गाजमिन पनि बाँकी रहेन,’ राजेन्द्रले भने, ‘बर्षायामका बेला दैनिकी यसरी नै बित्छ ।’
राप्ती उर्लिएर कतिखेर घरभित्र पस्छ भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ, सीताराम राढ । २०७१ सालमा घरमै सुतिरहेको अवस्थामा उर्लिएर आएउँदा उनी छोरा र छोरीसँग सुतिरहेका थिए । राप्ती उर्लिएर घरभित्र पसेपछि तीनैजना घरको घुरीमा गएर ज्यान जोगाएको घटना अहिले पनि उनलाई ताजै छ ।
‘राप्ती नदीले घरको घुरीबाटै बुवा र भाइबहिनी बगाएपछि बचाउन नसकेको घटना हिजोजस्तै लाग्छ,’ ३५ बर्षिय सीतारामले भने, ‘बुवा र भाइबहिनीलाई कसैले बचाउन सकेनन् । बुवाको मदजुरीले हाम्रो घर चलेको थियो । अहिले लथालिङ्ग बनेको छ । घरमा म एक्लो भएको छु, पैसा अभावले घर चनाउनै समस्या भएको छ ।’
राप्तीले आफ्नो गाउँमा मच्चाएको वितण्डा सम्झिने बित्तिकै नरैनापुर–६ सोनवर्षाका मोलाहे आर्य धोबीका आँखा अहिले पनि रसाउँछन् । ‘गाउँमा भरिएको पानी तीन–चार दिनसम्म निस्कँदैन । डुबानमा परी गाउँका कुनै मानिस मरेपछि दाहसंस्कार गर्नै समस्या पर्छ,’ मोलाहे भन्छन्, ‘पानी जमेको अवस्थामा खाना बनाउनै समस्या पर्छ ।’
बर्षा सुरु भएपछि गाउँमा बाढी पस्ने डरले गाउँलेहरु नजिकैको वनतिर लाग्छन् । वनमा एक घर एक टहरा बनाउँछन् । तीन महिना जंगलकै टहरामा बस्छन् । नदीको बहाव कम भएपछि आफ्नै गाउँ फर्किन्छन् । ‘अब त्यो वनमा गएर बस्न पनि समस्या छ । दुई बर्षअघि वनका मान्छे आएर हाम्रा टहरा जलाइदिए,’ मोलाहे भन्छन्, ‘हामी रहरले त्यहाँ बस्न गएका होइनौं ।’
पहाडी जिल्लामा बर्षा हुने वित्तिकै राप्ती नदीमा बाढीको कहर यसरी नै सुरु हुन्छ । राप्ती तटीय क्षेत्रसँगै सटेका गाउँलाई बाढीले क्षति गर्छ । उनीहरु जस्ता थुप्रै स्थानीयबासीको दैनिकी बर्षायाम भर राप्ती नदीको किनार र जंगलमै बसेर बित्छ । वर्षात सुरु भएपछि राप्ती किनारका बासिन्दा राम्रोसँग निदाउन पाउँदैनन् ।
नदीको भंगालो बस्ती छिरेर कुन बेला घरबास बगाउने हो भन्ने त्रासमा उनीहरुको दैनिकी बित्छ । बर्षा सुरु भएपछि ढुक्कसँग बस्न नसकेको टेपरीका स्थानीयबासी दुर्गाप्रसाद मौर्यले बताए । पहाडी क्षेत्रमा बर्षा हुन थालेपछि बाँकेमा बाढीको कहर सुरु भएको छ । राप्ती नदीमा पानीको सतह बढ्दै जाँदा प्रभावित क्षेत्रमा त्रास हुन थालेको छ ।
वर्षाको समय नजिकिँदै गर्दा बाँकेका नदी कटान तथा डुबान पीडितको पीडा बल्झिन थालेको छ । खासगरी राप्ती नदीको तटीय क्षेत्र होलिया, मटेहिया, फत्तेपुर, गंगापुर र कम्दीका झन्डै १० हजार प्रभावित व्यक्ति वर्षा सुरु भएलगत्तै विस्थापित हुने गरेका छन् । तर, ती गाउँलाई जोगाउन तटबन्धको प्रयास भएको छैन ।
सयौं किसान भूमिहीन भए, हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगर बनिसकेको छ । गाउँ जोगाउन सरकारी पहल नभएपछि उठिबास भएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘बुबाले बनाएको पक्की घर हो । यहाँबाट अन्यत्र सार्न मनै लागेको छैन,’ राप्ती कटान पीडित मौर्यले भने, ‘घर नभत्काए नदीले बगाउँछ ।’
भारतले एकतर्फीरुपमा निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध तथा कलकलवा तटबन्धका कारण पछिल्लो दशकमा त्यस क्षेत्रका झन्डै १० हजार बढी व्यक्ति प्रभावित हुँदै आएका छन् । ‘छानो सार्दै बर्षौ वित्यो, कतैबाट पहल भएन,’ टेपरीका सुकैयी बर्माले भने । सुकैयाको सात कट्ठा खेतीयोग्य जमीनसमेत राप्तीले बगाइसकेको छ ।
‘हरेक बर्ष छानो सार्ने हो । राप्ती नदी यो वर्ष पनि उर्लिँदै छेउमै पुगिसकेको छ । यो छानो पनि बगाउने निश्चित छ । अब यो छानोलाई उ त्यहाँ (अलि पर देखाउँदै) छानो हाल्ने हो,’ बर्माले भने । राप्ती नदी किनार बघौडा क्षेत्रका बेतहनी, बनकट्टी, फत्तेपुर, गंगापुर र मटेहिया लगायत बासिन्दाको साझा पीडा दशकौंदेखि यस्तै छ ।
भारतले सन् १९८५ मा निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँधका कारण यी गाउँहरुमा वर्षातको समयमा डुबान, कटान र पटान हुने गरेका छन् । लक्ष्मणपुर बाँधकै परिपूरकका रुपमा भारतले सन् २००० मा होलियाकै दक्षिणमा २२ दशमलव ५ किलोमिटर लम्बाई, ५ मिटर चौडाइ र उचाई भएको कलकलवा मार्जिनल तटबन्ध निर्माण गरेपछि समस्या झन् बढेको छ ।
कलकलवा र लक्ष्मणपुर बाँधले नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिँंदा र नियन्त्रित गर्दा डुबान हुने गरेको छ । हालसम्म यो क्षेत्रको ६० हजार जनसंख्या डुबान, पटान तथा कटानबाट प्रभावित भएका छन् । २०७० सालसम्म राप्तीले झन्डै २४ सय बिघा जमिन नष्ट गरेको थियो । ०७१ सालमा राप्ती र डुडुवा खोलाले करिब ४ हजार बिघा जग्गा उत्पादन अयोग्य बनाएको छ ।
अवैधानिक तवरले निर्माण भएको तटबन्धमा पानीको उचित निकास छैन । लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धका कारण नेपालबाट भारततर्फ बग्ने गन्धैली र सोतिया नाला सुकेका छन् । यसैले नेपाली भूभाग दशकौंदेखि कटान, पटान, डुबान र बाढीको पीडामा छ । भारतले होलिया र बेतनीको दक्षिण दशगजा सटेर सन् २००० मा कलकलवा तटबन्ध निर्माण गरेको थियो ।
२००३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणको दौरानमा दुई देशबीच कलकलवा तटबन्धमा सोतिया र गन्धौली नालाको प्राकृतिक बहाव खोल्ने सहमति भएको थियो । भारत पक्षले थुनछेक नगरेरै ढोका खोल्ने, राप्तीको दुवैतिर हुने कटानलाई रोक्न पक्की तटबन्ध निर्माण गरिदिने र उक्त क्षेत्रका विस्थापित तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
सार्कीगाउँमा पहिरो जाँदा १२ जना बेपत्ता
राप्ती नदीमा उद्धार ‘रिहर्सल’
भारतीय सीमामा गोली लागेर गोर्खा सैनिकको मृत्यु
सांसद सरिता गिरी पदमुक्त
नेपालको नयाँ नक्सामा भारतको असहमति, पठायो कूटनीतिक नोट
आइजी नियुक्तिमा नयाँ रीतको सुरुवात
सांसद ‘नमूना’को सक्रियतामा नरैनापुरमा सर्पदंश उपचार केन्द्र
‘मोस्ट वान्टेड’ दुवेलाई नभेटेपछि नेपालगन्जबाट रित्तै फर्कियो भारतीय प्रहरी
३२ जनाले गरे रक्तदान
नेपालगन्जमा १५ प्रतिशत एकीकृत सम्पत्ति करमा कटौती
जुम्लामा १७ पशु आयोजना सकिए
नेपालगन्जको वडा नंं २ मा पौने तीन करोड खर्च
विकास दुबेको इन्काउन्टरपछि तरङ्गित बन्यो भारतीय राजनीति
बिहेको ९ दिनमै श्रीमान मारिए, श्रीमती जेलमा
www.satyapati.com isaTrue search, experiment, practice and collection. We are fully aware of media ethics and social values. It’sacomplete news portal withavariety of features. It is published in both versions, Nepali and English.
कार्यकारी सम्पादक : विष्णु सापकोटा
निर्मला खडायत (कैलाली)
मुख्य कार्यालय : नेपालगन्ज-०४, बाँके
Office : info@satyapati.com
News : satyanews100@gmail.com
URL : www.satyapati.com
© 2019 satyapati.com. All Rights Reserved. Desigh by Aarush Creation